हामी आफ्नो भान्साघरमा नियमित बेसारको प्रयोग गर्ने गर्छाैँ । एक चिम्टी बेसारले समेत हाम्रो स्वास्थ्यमा अभूतपूर्व लाभ पुऱ्याउँछ । रगत सफा गर्ने, रुघा–खोकी निको गर्ने अनि क्यान्सरमा समेत मद्दत गर्नुका साथै योगको अभ्यासमा पनि सहयोग गर्न सक्छ । सद्‌गुरु, यसबारे विस्तृतमा बताउँदै हुनुहुन्छ ।
१. बेसार— शरीरको शुद्धिकरणको लागि
सद्‌गुरुः बेसारले तपाईंको रगतलाई सफा गर्दछ, साथै तपाईंका उर्जाहरूलाई निर्मल बनाउँछ । बेसारले तपाईंको शरीरमा मात्रै काम गर्ने नभई तपाईंको उर्जा प्रणालीलाई समेत प्रभावित गर्दछ । यसले शरीर, रगत र उर्जा प्रणालीलाई शुद्ध गर्दछ । शरीरलाई बाहिरबाट शुद्ध गर्नको लागि एक बाल्टी पानीमा एक चिम्टी बेसार हाल्नुहोस् र यो पानीले नुहाउनुहोस्— तपाईंले यो देख्नुहुनेछ कि तपाईंको शरीर जीवन्त र चम्किलो हुनेछ ।
२. बेसार— रुघा, खोकी र चिसोबाट बच्नको लागि
३. बेसार— क्यान्सर प्रतिरोधक गुण हुन्छ
४. बेसार— योग साधनामा लाभदायक
पटक–पटक खाइरहनु किन हानिकारक ?
तौल घटाउन र स्वस्थ रहनको लागि कचरपचर नखाइरहने विधि लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यो सदैव योग संस्कृतिको अङ्ग रहेको कुरा बताउँदै, सद्‌गुरु, यसबाट अधिक लाभान्वित हुन यसलाई कसरी सही ढङ्गले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ । .